I-Oppo Reno isebenzisa itekhnoloji yokurekhoda yeaudio yeNokia | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Oppo Reno isebenzisa itekhnoloji yokurekhoda yeaudio yeNokia
AbakwaNokia bafumana ukuthandwa kwihlabathi liphela ngenxa yokuvela kwakhona kweNokia brand brand, kwaye oku kubonakala ngathi kusenze sakulibala ukuba iNokia inezinye iinkxalabo zeshishini lobuchwephesha, kubandakanya izixhobo zokwenza izixhobo kunye nenethiwekhi. Inkampani yaseFinland ikwaphethe uphawu lweOZO, evelisa iteknoloji yekhamera kunye netekhnoloji yeaudio.
Kuya kuvela ukuba i-smartphone entsha Oppo Reno eyaphehlelela amanqaku aliqela oguquko ikwanayo Itekhnoloji yokurekhoda yeaudio, eyaziwa ngokuba yiOZO Audio. Oku kusixelela ukuba ifemi iyakwandisa ukubetheka kwayo kwishishini, hayi ngee-smartphones kuphela.
Olu lwazi luvezwe yiNokia kwingxelo yayo ye-Q2019 2019, apho yabhengeza ukuba ekuqaleni kwe-QXNUMX XNUMX, u-Oppo wasungula i-smartphone yakhe entsha, i-Oppo Reno, esebenzisa itekhnoloji ye-OZO Audio yeNokia. AbakwaNokia khange babhengeze ukuba ngaba iOZO Audio ikwinguqulelo yeReno okanye ye Inguqu ye-10X yokusondeza, okanye zombini. Nangona kunjalo, ukuba ukunye, kunokwenzeka ukuba ukwenye.
Okumangalisayo kukuba U-Oppo akazange alikhankanye eli nqaku lilandelayo ngexesha lokumiliselwa kweemodeli zeReno. Oku kunokuba ngenxa yesicwangciso segama, kuba uNokia ukhuphiswano ngqo kwicandelo lee-smartphones, njengabanye abavelisi, abanjengoXiaomi kunye ne-OnePlus.
Inkampani yaseTshayina isenokungafuni ukuba umsebenzi ugqibe ukusondeza ikhamera ye-10X enekhamera ye-periscope eyona nto iphambili kushicilelo lweReno 10x kunye Reno 5G ebisandula ukutyhilwa kuyo Europe, kwaye yiyo loo nto ingakhange ichaze iinkcukacha ezichaziweyo kwisiphelo sendlela ephezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Oppo Reno isebenzisa itekhnoloji yokurekhoda yeaudio yeNokia
UXiaomi ufuna ukuguqula intengiso yabafundi abakwi-screen zeminwe
I-Galaxy S10 ihlaziywa ukuphucula ibhetri yayo